Lapatinib poda (231277-92-2) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / vamwe / Lapatinib upfu (231277-92-2)
Rating: SKU: 231277-92-2. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika mukuraira kwePatatinib powder (231277-92-2), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Lapatinib powder Basic Characters
Name: Lapatinib powder
Molecular Kurema: 581.05
Color: Yakachena kana kuti inopera white Crystalline powder
Raw Lapatinib powder muAntineoplastic Agent cycle
Zita rechizvarwa: Lapatinib powder (ya PA tin ib)
Zita Rekushandisa: Tykerb
Lapatinib poda ndiyo mishonga yemishonga inoshandiswa nemumwe mushonga (capcitabine) kuporesa vanhu nekenza yemazamu yakapararira kune dzimwe nzvimbo dzomuviri inonzi HER2 positive (tumumumu inobereka huwandu hweprotini inonzi human epidermal growth factor receptor-2) , uye ndiani akambova nedzimwe mimwe mishonga yekenza yemazamu.
Lapatinib poda inoshandiswawo nerudzi rwemishonga inonzi letrozole yekurapa kwevakadzi vane postmenopausal vane hormone receptor positive, HER2 positive metastatic cancer yepamu iyo inonzi hormonal therapy inoratidzwa.
Lapatinib powder mishonga yemishonga inoshandiswa kurapa kenza yemazamu. Inoshandiswa mukubatana nemimwe mishonga yekurapa imwe rudzi rwekenza yemazamu yakapararira kune dzimwe nhengo dzomuviri uye iyo haina kupindura kune mamwe marapirwo emishonga.
Lapatinib poda ndeyeboka remishonga inonzi kinase inhibitors iyo inoshanda nekuvhara chiito cheimwe puroteni inoratidza zvirwere zvekenza kuti zviwande.
Iyi mishonga inouya mufomu yebhetheni uye inotorwa kamwe chete zuva rega rega musina chinhu chisina chinhu.
Nzira dzakajairika dzePatatinib powder dzinosanganisira dzvuku, maoko anorwadza uye tsoka, chirwere, chirwere, uye kusuruvara.
Ndeipi muyero weLapatinib powder
Kuita Mukuru weDose weCear Cancer
-HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER (pamwe chete ne capecitabine): 1250 mg muromo kamwe kamwe pazuva pazuva Mazuva 1 kusvika ku21 nekudzokorora mishonga yezuva 21 kusvikira kukura kwechirwere kana kusagamuchirwa chepfu.
-HORMONE RECEPTOR-POSITIVE, HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER (pamwe chete ne letrozole): 1500 mg muromo kamwe kamwe pazuva pazuva.
-Consult the manufacturer product product for capecitabine uye letrozole dosing recommendations.
-HER2-positive metastatic cancer yepachirwere chepachirwere inofanirwa kuva nehutachiona hwehutachiona patrastuzumab isati yatanga kurapwa nemudhaka uyu pamwe chete ne capecitabine.
-Kubatanidzwa ne capecitabine pakurapa varwere vane kenza yepamusoro kana yemasastatic vane tumoropa overexpress HER2 uye avo vakagamuchira preprepti inotanga kusanganisira anthracycline, taxane, uye trastuzumab.
-Kubatanidzwa ne letrozole pakurapwa kwevakadzi vanonzi postmenopausal vane kemukari yemakemikari yemakemikari yemakemikari inotora-positive iyo inonyanya kushungurudza HER2 receptor iyo inonzi hormonal therapy inoratidzwa.
Renal Dose Kugadziriswa
Dhiyabhorosi haigoni kuwanikwa maererano nekugadzirisa dhigiriji; zvisinei, iyo pharmacokinetics yechirwere ichi haifaniri kuve yakagadziriswa yakapiwa kuti pasi pe2% yehutachiwana huri kubviswa neitsvo.
Chiropa Dose Kugadziriswa
MHURI YOKUTANGA-YAKANAKA KUDZIDZA HEPATIC IMPAIRMENT (CHILD-PUGH A / B): Data haisipo.
CHIKAMU CHEMWE CHEMWE CHINOKOSHA HEPATIC IMPAIRMENT (CHILD-PUGH C): Kuderedza dambudziko:
-HER2-Yakanaka Metastatic Breast Cancer (pamwe chete ne capecitabine): 750 mg / zuva.
-Hormone Receptor-Yakanaka, HER2-Positive Metastatic Breast Cancer (pamwe ne letrozole): 1000 mg / zuva
KANA HEPATOTOXICITY OCCURS PAMUSORO WOKUTAURA: Usagadzikana kurapwa zvachose.
Mhinduro: Dose kugadziriswa mazano anobva pane zvidzidzo zvepa pharmacokinetic; hapano kliniki data inowanikwa.
MUMWE MUMWE MUMWE ANOSHANDISA NEZVAKAITIKA CYP450 3A4 INHIBITORS AND / OR STRONG CYP450 3A4 INDUCERS: Ngwarira kushandiswa kushandiswa kana zvichibvira. Dose kuchinja kugadziriswa kunowanikwa pane zvidzidzo zvepa pharmacokinetic; hapano kliniki data inowanikwa.
KUDZIDZISA KUSHANDISA NOKUSIMBA CYP450 3A4 INHIBITOR: Deredza chirwere ku500 mg / zuva; bvumira nguva yekufambisa inenge yevhiki ye1 isati yakwana kuchinjwa kwechirwere ichi kune inowanzodiwa chirwere kana inhibitor isingagumi.
KUKUNDA KUSHANDISA NESIMBA YOKUTANGA CYP450 3A4 INDUCER: Zvishoma nezvishoma up-titrate dose yakakonzerwa nekushivirira; kuderedza dose kudzokera kune inowanzogadziriswa muwandu kana inducer isingagumi.
-HER2-Positive Metastatic Breast Cancer (pamwe chete ne capecitabine): Wedzera muzinga kusvika ku4500 mg / zuva.
-Hormone Receptor-Yakanaka, HER2-Positive Metastatic Breast Cancer (pamwe ne letrozole): Wedzera muzinga kusvika 5500 mg / zuva.
Giredhi 2 kana KUKURU KUDZOKA KUSIYANA VENTRICULAR EJECTION FRACTION (LVEF) KANA RUDO RUNODONhedZA PASI PASI PASI PASI PASI PASI PAMWE CHETE: Regedza kurapwa; inogona kutangazve pane yakaderedzwa dhizeti mushure mechinguva chidiki chemasvondo maviri kana LVEF ikapora kune yakajairwa uye murwere isymptomatic.
-HER2-Yakanaka Metastatic Breast Cancer (pamwe chete ne capecitabine): 1000 mg / zuva
-Hormone Receptor-Yakanaka, HER2-Positive Metastatic Breast Cancer (pamwe ne letrozole): 1250 mg / zuva
GRADE 3 KANA GRADE 1 kana 2 DIARRHEA NOKUDZIDZA ZVINHU ZVINOKUDZIDZA (kuenzanisa kusvika kune zvakanyanya kuberekwa pamuviri, Gwaro 2 kana kunyanya kunetseka kana kurutsa, kupera kwemaitiro ekushanda, fever, sepsis, neutropenia, kubuda ropa kwakachena, kana kupererwa mvura): Ungadzorera zvakare muzana rezasi kana chirwere anosarudza kuGwaro 1 kana kuti pasi.
-HER2-Yakanaka Metastatic Breast Cancer Varwere (pamwe chete ne capecitabine): 1000 mg / zuva
-Hormone Receptor-Yakanaka, HER2-Positive Metastatic Breast Cancer Varwere: 1250mg / zuva
GRADE 4 DIARRHEA: Usagadzikana kurapwa zvachose.
DZIMWE ZVINHU ZVINOKUDZIDZA, GRADE 2 kana GURU: Ungafunga kusagumira kana kukanganiswa kwe dosing; inogona kutangazve paanowanzobvumirwa chirwere kana doro rinowedzera kuGwaro 1 kana kuti pasi.
KANA IFATICITY RECURS: Deredza dambudziko:
Iyo yakasvibiswa sei Lapatinib powder inoshanda
Lapatinib poda inoshandiswa ne capecitabine (Xeloda) kuporesa rudzi rwakadaro rwekenza yepamusoro yepabonde kune vanhu vakatoreswa nemamwe mishonga yemakemikrasi. Lapatinib poda iri mukirasi yemishonga inonzi kinase inhibitors. Inoshanda nekuvhara chiito cheprotini isina kuchena iyo inoratidza kuti masero ekenza anowedzera. Izvi zvinobatsira kumisa kana kuderedza kupararira kwekenza masero.
Taurira vose vanopa utano hwako kuti unotora Lapatinib powder. Izvi zvinosanganisira vanachiremba vako, vanachiremba, vanachiremba, uye vanachiremba mazino.
Kana iwe wakagumburwa mudumbu, kukanda, kusununguka (chirwere), kana kuti usina nzara, taura nachiremba wako. Panogona kunge kune nzira dzekudzikisa migwagwa iyi.
Zvisununguko (diarrhea) zvakaitika neLapatinib powder. Dzimwe nguva, chirwere chemashuva chakange chakaipa kwazvo uye kufa kwakaitika. Taura nachiremba wako.
Kana iwe uine zvigaro zvakasununguka (chirwere), taura nachiremba wako. Usaedza kurapa zvirwere pasina kutanga kutarisa nachiremba wako.
Ita basa rega rega rinotarirwa sezvawakaudzwa nachiremba. Taura nachiremba.
Iwe unoda kuva nemoyo unoshandiswa mutsva paunotora Lapatinib powder. Taura nachiremba.
Dzivisa mazambiringa nemafuta emuzambiringa.
Kana uri kutora digoxin, taura nachiremba wako. Iwe unogona kuve nekuita basa rako reropa rakaongororwa zvakanyanyisa paunenge uchitora neRapatinib powder.
Mushonga uyu unogona kukanganisa mwana asati aberekwa kana iwe ukatora iyo iwe wava nepamuviri.
Shandisa chirongwa chekuberekwa chaunogona kuvimba nacho kuti udzivirire pamuviri uchitora Lapatinib powder.
Kana iwe uri nepamuviri kana iwe uchinge wava nepamuviri paunotora Lapatinib powder, dana chirwere chako zvakarurama.
Ko ipatinib yakasvibiswa yakasviba Iine Matambudziko Api
Izvo pamwe nemigumisiro yayo inoda, Lapatinib powder inogona kukonzera zvimwe zvisingabatsiri. Kunyange zvisinei zvose izvi zvinokonzerwa nemigumisiro inogona kuitika, kana zvikaitika zvinogona kudiwa kurapwa.
Tarisa nechiremba wako pakarepo kana chimwe chezvikamu zvinotevera zvinowanikwa paunotora Lapatinib powder:
Kunetseka kana kufema kunobatsira
kushingaira kana kusina kushaya mwoyo
kuneta kunoshamisa kana kushaya simba
Kusuruvara kana mucheche kurwadziwa kana kusuruvara
ivhu rakaiswa zvigaro
kuderedza kudya mwoyo
kuchenesa kana ganda kumhanya
kushungurudza uye kurutsa
kurira kwetsoka kana kumakumbo makumbo
meso matsvuku kana ganda
Kusvetuka, kutarisa, kusunungura ganda
manzwiro akazara ekusafara kana kurwara
kubatana kana musuru kurwadziwa
kuzvikudza kana kuzvimba kwemaziso kana kumativi ose, chiso, miromo, kana rurimi
tsvuku dzeganda tsvuku, kazhinji neine ruvara rwepepuru
tsvuku, kutsamwiswa meso
maronda, maronda, kana machena mumuromo kana pamiromo
kuwedzera kwezvinyorwa zvisingabatsiri
Dzimwe mimwe migumisiro yeLapatinib poda inogona kuitika iyo kazhinji haifaniri kurapwa. Izvi zvingava nemigumisiro inogona kupera panguva yekurapa sezvo muviri wako uchigadzirisa mushonga. Uyewo, unyanzvi hwehutano hwako hunogona kukuudza nezvemigadziro yekudzivirira kana kuderedza zvimwe zvezvikamu izvi. Tarisa neunyanzvi hwehutano hwehutano kana imwe yemigumisiro inotevera inopfuurira kana inoshungurudza kana iwe une mibvunzo pamusoro pavo:
Acid kana mimba yakasviba
kurwadziwa muzvanza kana pamakumbo
kubwinya, kuzvimba, kana ganda rinorwadza
kuwedzera kweganda pamaoko nemakumbo
maronda, maronda, kana machena pamiromo, rurimi, kana mukati memuromo
dumbu kusagadzikana, kutsamwa, kana kurwadziwa
kuzvimba kana kuputika kwemuromo
kutinhira kwemaoko netsoka
Nzira yekutenga Lapatinib powder kubva kuAASRAW